श्रीमान् परदेशमा : श्रीमती यस्तो पौरख गर्दै घरदेशमा, महिनाको लाखौं आम्दानी गर्दै…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर २८, २०७७ आइतबार 1
लमजुङ : परिश्रम गर्ने हाे भने परदेशकाे भन्दा स्वदेशमै राम्राे कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अचेल गाउँघरतिर धेरै भेटिन थालेका छन् । तिनै उदाहरणमध्येकी एक हुन् लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका–८, डुँड्कुलाकी सिर्जना कमली कार्की ।
‘उत्पादित अण्डा स्थानीय स्तरमा खपत हुँदै आएको छ । अण्डा बिक्रीबाट मासिक ५ लाख हाराहारीमा कमाइ हुँदै आएको छ,’ सिर्जनाले भन्नुभयो, ‘दाना, औषधि, पानी, बिजुली लगायतमा पनि खर्च हुन्छ ।’
व्यवसायमा घर–परिवारको पनि साथ छ । सहयोग हौसला, प्रेरणा मिलिरहेको छ, उहाँलाई । फर्मले २ जनालाई रोजगारी समेत दिएको छ ।
‘२ रोपनी जग्गामा ८ वटा टनेल बनाई तरकारी लगाइएको छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘तरकारी बिक्रीबाट राम्रो कमाइ हुँदै आएको छ ।’
श्रीमान् विदेशबाट फर्किएपछि दुवै मिलेर यस व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने सिर्जनाको योजना छ ।
उहाँलाई व्यावसायिक कुखुरापालन र तरकारी खेतीमा भाइ नारायण कमलीको पनि साथ–सहयोग मिल्दै आएको छ । फर्म व्यवस्थापनमा उहाँले सघाउँदै आउनुभएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका नारायणको पनि यसै व्यवसायमा लागिरहने सोच छ । ‘श्रम–पसिना बगाउन सके, घरगाउँमै बसेर राम्रो कमाउन सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले व्यावसायिक कृषि कर्ममै निरन्तर लागिरहने सोच छ ।’
Prevबधाई ! नेपाली सेफ सन्तोस साह बीबीसीको मास्टर सेफ प्रतियोगिताको फाइनलमा…हेर्नुहोस् ।
Nextराज्य संचालन गर्नेहरु एकरात सडकमा सुतुन र भो’कै बसुन, अनि थाहा हुन्छ भो’क र पि’डाको वास्तविक कथा…पूरा पढ्नुहोस् ।
राजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस !